Obsessed (2014) – Gold Channel Movies
Video Sources 12973 Views Report Error
အချစ်နဲ့ဆုံဖူးသူတိုင်း ပြောတတ်ကြတဲ့စကားတစ်ခွန်းကတော့ love is blind ပါတဲ့။ အချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတိုင်းကတော့ အချစ်နွံထဲကို ပိုးဖလံမျိုး မီးကိုတိုးသလို မိုက်ရူးရဲဆန်စွာနဲ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ ခုန်ချခဲ့ဖူးကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါအမှားကနေ ထာဝရအပြစ်သားဖြစ်ခဲ့ရသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
အခုဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့ ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်စစ်ပွဲမှာ အနိုင်တိုက်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းလေး ဗိုလ်မှူးကင်ဂျင်ဖျောင်းတစ်ယောက် မိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဖြစ်သူ ဂျောင်ဝူဂျင်ရဲ့ဇနီးချောလေး ဂျုံဂါအွန်းကိုမှ တပ်မက်မိတဲ့အဖြစ်၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ အကြင်နာချစ်ခြင်းကို ငတ်မွတ်နေတဲ့ ဂျုံဂါအွန်းလေးကရော ခန့်ညားပြီးကြင်နာတတ်တဲ့ဗိုလ်မှူးလေးကိုမှ အဦးဆုံးအချစ်တွေနဲ့ အချစ်ကြီးချစ်မိလေတဲ့အခါ မသင့်တော်မှန်းမဖြစ်သင့်မှန်း သိပါလျက်နဲ့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ရှေ့ဆက်ရင်းအချစ်နယ်တွေကျွံကုန်တဲ့အခါ…….
ဒီကားလေးမှာတော့ ဂျွန်စောလို့အသိများတဲ့ autumn in my heart ထဲကမင်းသား Song Seung-heonနဲ့ the royal gambler ထဲကမင်းသမီး Lim Ji-yeon တို့က တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတာမလို့ ဇာတ်လမ်းမကောင်းမှာတော့ မပူရပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ကားလေးဖြစ်တာကြောင့် ၁၈ နှစ်အောက်တွေကြည့်ဖို့တော့ မသင့်လျော်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီ Obsessed ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်ရင်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ forbidden loveကရော ဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားလဲဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်ပါ
Run Time –2Hrs 12 mins
IMDb Rating 6.2 1,272 votes
PatsySeptember 5, 2021Reply
my web-site: asmr off (bit.ly)
LoreenSeptember 3, 2021Reply
Feel free to surf to my blog post :: asmr is (http://j.mp/3kKtL7d)
AlisaSeptember 2, 2021Reply
RileySeptember 1, 2021Reply
Visit my homepage; scoliosis surgery are
LesleeSeptember 1, 2021Reply
Feel free to visit my webpage with quest bars; bit.ly,
WindyAugust 30, 2021Reply
my blog post: our quest bars (http://bitly.com/3zuTMxD)
BrigitteAugust 28, 2021Reply
get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting why